MaWhatsApp Mapoka 🥇 Sangana nevanhu muWhatsapp Mapoka
Login o kunyoresa
Ona zvese zvawanikwa
Joinisa maWebhu eWhatsApp
Chii chauri kutsvaga
Zvikwata zveWhatsApp. Isu tiri yepamusoro sosi yekubatanidza Zvikwata zveWhatsApp pa internet. Pano iwe unowana akanakisa WhatsApp mapoka kutora chikamu. Mukuwedzera, iwe unogona zvakare kunyoresa yako WhatsApp boka nekutumira iyo link.
Nenzira iyoyo, vanhu vazhinji vanowana yako Zvikwata zveWhatsApp uye iwe uchave nevazhinji vatori vechikamu. Unogona kubatana nevakawanda Zvikwata zveWhatsApp sezvaunoda, isina muganho, uye iwe unogona zvakare kutumira mapoka akawanda sezvaunoda.
Maitiro ekugadzira boka reWhatsApp?
Gadzira a Zvikwata zveWhatsApp Zviri nyore uye nekukurumidza, ona:
Vhura yako WhatsApp uye pazasi tinya pane iyo tab Kukurukurirana .
Zvino, mukona yekurudyi yepamusoro, nechezasi kwesimba rekutsvaga, penya Boka idzva .
Mune shamwari shamwari, sarudza vatori vechikamu muboka rekutanga uye wobva wadzvanya Zvadaro .
Isa zita reiyo WhatsApp group iro richagadzirwa.
Dzvanya pane kamera kamera uye wedzera mufananidzo kune rako boka.
Pakupedzisira tinya bhatani Dza .
Chinhu chikuru-chakakosha chipikiri kuti ubudirire neyako Zvikwata zveWhatsApp- Funga nezvezita rinonakidza reboka rako uye sarudza mufananidzo wakanaka une chekuita neboka theme. Izvi zvichaita kuti vanhu vazhinji vanofarira kujoina yako WhatsApp boka.
Nzira yekudzima sei maWhatsapp Mapoka?
Vhura WhatsApp uye tinya pane boka raunoda kudzima.
Neboka ravhurika, tinya zita reboka kumusoro.
Skrira pasi kune iwo mutori chikamu uye bvisa vese vatori vechikamu.
Dzvanya pasi pechiso uye dzvanya Siya boka .
Pakupedzisira, ita tinya Delete group .
Zano: Iwe unofanirwa kutanga wabvisa vese vatori vechikamu muboka usati wabva muboka; kana zvisina kudaro, boka racho harizobviswi uye hapana wevatori vechikamu anozova mutariri mutsva weboka.
Nzira yekuwana sei WhatsApp Mapoka?
Kuti uwane mapoka eWhatsApp, iwe unofanirwa kuenda kune yedu webhusaiti (mapokawhats.app) uye tsvaga pakati pezvikwata zvakasiyana zvemapoka atinawo. Panguva ino, iwe haugone kutsvaga mapoka eWhatsApp mune iyo pachayo basa.
Nzira yekujoinha WhatsApp group?
Kuti ubatane neboka reWhatsApp, unofanira:
Kutanga shanyira webhusaiti yedu.
Tsvaga iro boka raunoda kupinda mune dzakasiyana siyana zvewebsite yedu.
Dzvanya pane iro boka raunoda kujoinha.
Papeji rinozovhura, tinya Joinha boka .
Ungasiya sei WhatsApp Mapoka?
Vhura WhatsApp uye tinya boka raunoda kubva.
Ungawedzera sei munhu kuWhatsApp group?
Kuti uwedzere munhu kune WhatsApp group, tevera matanho ari pazasi:
Vhura WhatsApp uye tinya pane boka raunoda kuwedzera munhu kwaari.
Dzvanya pazita reboka kumusoro.
Skira pasi kune iwo mutori chikamu uye tinya Wedzera vatori vechikamu .
Mune irondedzero inovhura, sarudza vanhu vese vaunoda kuwedzera kuboka.
Pakupedzisira tinya bhatani Wedzera mukona yokumusoro kurudyi.
Kutarisa: kuwedzera vatori vechikamu muboka reWhatsApp, iwe unofanirwa kuve mubati weboka.
Maitiro ekuita boka reboka kubva kuWhatsApp?
Wakanga uchiziva here kuti iwe unogona kuita boka rekufona paWhatsApp? Hongu, iwe unogona kuita mapoka ekufona evanhu vanosvika mana panguva, iwe nevamwe vatatu. Mafoni anogona kuve vhidhiyo kana odhiyo. Tevedza matanho ari pasi apa:
Vhura WhatsApp uye tinya pane boka raunoda kufonera.
Mukona yokumusoro rekona reboka, tinya chiratidzo chefoni nechiratidzo chekuwedzera.
Mune iyo rondedzero inovhura, sarudza kusvika kune vanhu vatatu.
Chekupedzisira tinya pane vhidhiyo kamera icon kana iwe uchida kugadzira vhidhiyo kufona kana kudzvanya pane iyo foni icon kuti ugadzire yekufona.
Vangani vanhu vanogona kukodzera muboka re WhatsApp?
Parizvino, boka reWhatsApp rine vanhu vanosvika makumi maviri nemashanu. Nekudaro, pakutanga vanhu zana chete paboka rimwechete vakabvumidzwa, asi nekufamba kwenguva uye iyo app yakawedzera exponentially, WhatsApp yakafunga muna 256 kuwedzera simba rayo kubva pa100 kusvika ku2016.
Maitiro ekugadzira peji rangu WhatsApp group?
Nekugadzira peji rako WhatsApp group, unogona kupa ruzivo rwakawanda kunhengo dzeboka rako. Kuburikidza nepeji iwe unogona kunyora kutsanangurwa kweboka, iyo mitemo inoteedzerwa uye kunyangwe vari vatariri veboka. Nenzira iyoyo, iwe haufanirwe kunyora tsananguro refu muboka rako, ingo govana iyo peji peji uye voila!
Svika iyo inongedzo yekugadzira yako peji boka nekudzvanya pano
Isa chinongedzo cheboka (mufananidzo uye zita reboka richazadziswa zvoga)
Zadza iyo minda yasara pafomu
Pakupedzisira, tinya bhatani "Gadzira peji"
Zvaitwa, yako WhatsApp group peji ichagadzirwa uye unogona kuigovana nenhengo dzese dzeboka rako.
Ongorora maWhatsapp Mapoka
Art & Nhoroondo
Zvikwata zveWhatsApp zvekare
Iwe uri asocial uyo asingagone kuita shamwari nyore? Kugara kune imwe nzvimbo kwakawandisa kwauri here? Aihwa…
ita shamwari, gara uchiseka, tuma tsvimbo, ugovana masocial network, usaite kuti boka rife.
Boka Boka! 💯
* MITEMO NDIYE / kana KUTI ZVINOGONESA ZVOKUSHANDISA *
Peruvians Inotenderwa 😈
Vhura Kufungisisa Cab
Vanodiwa shamwari dzechokwadi, dzinogamuchirwa kune iri boka nyowani. Ino nzvimbo yakagadzirirwa kugovana mameseji ...
Muboka iri tiri kuenda kuzokupa iwe nziyo dzaunobvunza isu pamusoro pezvekuti boka redu rine zvaro ...
Boka kuti utaure uye unakirwe, ita shamwari uye boludear, huya, [Email akadzivirira], bhaari inobvumirwa saka usauye ...
Ini handikumbire ruregerero asi hapana chemaforamu ane zviso zvavo nezera zvakapusa kana izvo
Zano Shelo Nabel Rous
Mhoro, zita rangu ndiRocío Tapia uye ndinogona kukubatsira kugadzirisa kusahadzika kwako kwese kuitira kuti utange rako bhizinesi ...
VAMWE VANHU VANOGARA KUTI VANOGARA MU SPAIN !! (prefix +34)
Boka kushandisa rakakura pfungwa uye kubatana kunamatira akanaka rudo, verenga mitemo uye zvese zvichave zvakanaka mabhis
GROUP YEMUKADZI ENTER
Boka revasikana kunakidzwa uye zvese izvo zvinoda
Iboka revanhu vakanaka uye vakanaka vanhu vanoda uye vanofarira kupedza anime uye kutaura nezvenhezheni yavo ...
Iwo masimba masimba
Sa x sa Saved X x Yakaponeswa Comment x yemaonero Simba rinogona kusiyana
Boka rekunze nezvimata uye musangano wekutaurirana vanhu vanotonhorera kubva kumativi ese epasi. Wese munhu anogamuchirwa 👌
Iri boka kusangana nevanhu uye Acer kugara muboka uye yakanaka mamiriro uye akanaka vibes
Boka rekutaura uye uve nenguva yakanaka yekutaura nezve chero musoro
Vanodanana nemachira rudo rizere PORN mavhidhiyo INTERNAL uye PRIBADO. HEROTIC GAMES. Zvakanaka…
* 🎭 ＷＥＬＣＯＭＥ ＷＥＬＣＯＭＥ 🎥 🍿 * * 🍿🎬ＣＩＮＥ
inonakidza boka dhiza uye kunakidzwa isu tine mitemo ... anoshanda adhis
Iri boka rekuita shamwari kana kudarika: 0 Age range 13-24 HAPANA PORN HAPANA CHEMA NO SPAM HAPANA GORE
Boka rakaita shamwari 😎👌
Memes anoyeuka zvinhu zvakawanda zvisina kusimba uye zvisina basa
Isu tiri dystopian boka ratinogara separadhiso pasina chiperengo zvikanganiso. Ivo vachabviswa ...
ROLEPLAY THE Kufamba KUSVIRA
Mhoro! Mangwanani akanaka, masikati, manheru kana chero nguva yaunenge uchiverenga izvi. Kana iwe uri kufarira ...
Vanonakidzwa vanhu vanobatana nevanhu vanoziva kugarisana nevamwe vachipesvedzera kushamwaridzana vese pamwechete.
Tikugashirei Nationalist boka, boka kutaura nezvematongerwo enyika, ita shamwari uye kunakidzwa have
꧁ঔৣ☬✘ ąɱї ی ԵԵ
Hushamwari hwenyika dzese 🌏 💙
Yakanaka pombi ini ndinokukoka iwe kuti ubatanidze shamwari yangu boka, porn inorambidzwa uye ini ndinotuka, chero munhu anotumira ...
zveruzhinji phobia kune avo anopfuura makumi maviri neshanu
Sakanidza nzvimbo ine hutano uye inodziya. kuravira kwakashata kunorambidzwa.
Boka rakatsaurirwa kuparadzira esoteric zivo, yezvidzidzo zvese, tarot, kuverenga huwandu, tsika, nezvimwe.
Shanda usingabve pamba (Bogotá - Colombia 🇨🇴)
Isu tiri kambani yehuku inowanikwa muguta reBogotá, ine makore makumi matatu mumusika uye zviri pamutemo ...
🌠 Shamwari, Vakaroora uye Zvimwe 🌠💃
Tumira kuzita, zera, nyika uye mufananidzo (nyika uye sarudzo yemifananidzo). ⚡Zvakawanda kusangana nevanhu ...
꧁ ༺ T 卄 乇 卂 F 卂 爪 Ĩ ㄥ ㄚ ༻ ꧂
꧁ ༺ T 卄 乇 F 卂 爪 Ĩ ㄥ ㄚ ꧂ ꧂
Kufanana ne x seKupindura x maoni Yakachengetedzwa x yakachengetwa
Memes uye zvisingaiti zvitambi
Boka kuti uwane zvimiti uye uite shamwari 🙂
Zvese mune imwe varaidzo
Iri boka nderokugovana zvinonaka uye zvivaraidzo, zvingave anime, vhidhiyo mitambo, hunyanzvi, mimhanzi, kutsvaga hushamwari kana ...
ITSVI YEMUDZIMAI (GROUP ASI ANOGONESESA VANA)
Kutyisa, kutya, boka remapoka uye zvese zvine chekuita.
Hushamwari uye rudo
Chinangwa cheboka ndechokuva nenyaya dzakanaka dzekukurukurirana uye kuverengera, ingave itsika yechero ...
UMAMBO hwePPSSPP (DM GAMER OFC)
VANOTI VANHU VANE ZVINOGONESESA IZVI IZVO ZVISINA RUDO RAT KIDS (RAKANZVIWA ANDROID NEPAMPEMPURU PPSSPP EMULATOR…
MITEMO 1) * Hapana zvinonyadzisira zverudzi chero rupi zvarwo 2) * Usashusha usave fucking 3) * IZVO ZVINONZI ZVESANGANO 4) ...
DZIDZISO / BHAIBHERI
Kudzidzisa vasikana South America Dunhu Anopfuura makore gumi nemaviri Vanoziva kutamba mu vs Over ...
Ingori boka revanhu vakasarudzika munharaunda vari kutsvaga vanhu vachiti iro iboka rezvinamato asi ...
Boka rakagadzirwa kuti riyeye uye kuyemura billie eilish💚 Inotenderwa: Pass Wallpaper💚 Pass…
Boka rekutaura nezve clairvoyance, tarot uye esotericism. Dzidzo uye kuremekedza mitemo
✨💚💛HARRY Potter Pasi rose muSpANISH💙❤️✨
Xoxo✨LUMOS MAXIMA ❥Very akanaka varoyi nevaroyi, munogamuchirwa kune boka idzva raHarry Potter, pamunogona…
Mangwanani akanaka, ini ndinokukoka kuti ubatanidze boka rangu rehukama hwepasi rose, makore gumi nemaviri kusvika makumi maviri nemaviri pazere: 12
HD mafirimu, Series uye Anime
*[Email akadzivirira]: ♻ Club de Animes Y Pelí .. 🎥🎞 * * GROUP RULES: * *
Boka kuti unakirwe nekutaura, pinda
Boka revasikana uye vakomana vanobva kuArgentina kusvika pamakore makumi maviri nemasere. Kuti utaure, sangana nevanhu, ugovane, ushamwari, ...
joinha boka rangu rechamutswa rinobatana nefafa ndiri kurasikirwa nemitezo uye ndiri kuwirawo mukati ...
Zvemahara zvemukati group kuita shamwari
Ingouya uchipinda panze. Zvirinani kumutsidzira zvishoma izvi shit xD
Ratidzira kumusoro neZita, Zera, Nyika uye Mufananidzo (wakasarudzika)
Bhizinesi remhuri rakatsaurirwa kugadzirwa uye kutengeswa kwezvigadzirwa zvekudya. Isu tinogadzira zvingwa nemakeke, ...
Hushamwari, uye yakanaka vibes, hapana xxx ndapota uye kunakidzwa!
Joinha uye upe nziyo dzako dzakanakisa, kuti iwe unakidzwe nemhando yepamusoro sondtracks uye iwe unogona Kugovana ...
otakus \_ anime akateedzana
Buenooooooooo, anime mfululizo, anime memes akagoverwa pano ... zvese zvine chekuita ne anime, ndez ...
Clan Yemahara moto North America
Nhoroondo Yedzinza 🔥
MAHARA NETFLIX HBO ANOGONESA MITEMO 🙂
RUDO NETFLIX HBO DHAVHIDHI ZVINOGONESESA ZVESIMAI ZVEMAHARA NEZVO ZVINHU ZVINYORA MAMAHARA NEVAPI 🙂
Boka rekukurukura zvese zvikamu zvemasvikiro esayenzi, esotericism uye tarot. Taura nedzimwe nhengo ...
🎬🎮🎧🤳🏻Ushamwari, unFun, 🎉
Shamwari, zvinonakidza, mimhanzi, marudzi ese, Apks, Mavhidhiyo, Mitambo, Mabhuku, memes, mapikicha, nhevedzano, nezvimwe ... zvinotenderwa ...
VAKAFA chikungiso 2
Kana iwe uchida kushandisa nguva yakanaka uchitaura nezvemutambo uyu wakanaka, mira neboka iri; )
Susy Kutengesa pack Vidllamds Gnt Seria
Ini ndinotengesa vhidhiyo mapaketi inopisa mafoni uye yakawanda yakawanda paypal oxo nezvimwe
Isu tiri boka reLBBT paWhatsApp, tinogamuchira vanhu vanobva kunyika dzese, hatigamuchire zvirimo + 18, ...
Verenga mirairo Izvo chete zviripo kubva kuTiktok kana Tiktoker's Vhidhiyo, gadzirisa, mifananidzo, mimhanzi, memes uye zvakawanda ...
Best shitpost group zvichienderana Mr. Boomer na BrazuTaser😎🏅 • Kune vatsva iripo maiyo pitusas, manaos uye…
Anime Foramu / l / Kawaii Nharaunda: 3
Foro Anime imhuri ine hutano yekugadzira shamwari nekusangana nevanhu. Pano zvakare mipiro yeanions yakagadzirwa, ...
VAENDA KUTI VANosangana VANHU
Boka rekupokana uye kuratidza pane zvemashura zvesaenzi, esotericism uye tarot. Wese munhu anogamuchirwa. Dzidzo…
rarama hupenyu - HAPANA spam
boka kutaura uye kuita shamwari
Kuiswa kunzvimbo yausingasangani nevamwe
Kugara kwega kwega kunokanganisa kujoina boka uye iwe uchaona (ASI VANODA)
Kuwana ETHEREUM 🤑
Kununura ETHEREUM uye KUTI Uwane KUDZIVANYA KWAKANAKA 📈
Anime uye firimu
♡ Kudzoka kweArabhu ♡
Handeyi nazvo! Hongu vossss, chidimbu chekucheka, gadzirira kunakidzwa uye kusangana nemusikana anoshamisa kwazvo we…
GROUP RULES; ita ne / kana isina mufananidzo, nyika uye zera (tsika yebonde kuti usafarire: '(…
Kugara, kubatana kana kufa
Forovidentes.com boka rine chinangwa chavo chekukurukura zvese zvikamu zve esotericism uye ...
Pinda kuti utaure nezve kpop, kdramas ...
RUDO RUDI NESHAMWARI
Ita shamwari nyowani
Kpop, jpop uye anime
Iwe unogona kutaura pamusoro pezvinhu zvese zvine chekuita neAsia
乇 ℓє ¢ є∂█▬█є∂█▬█ █ ▀█▀◤ℝ▀█▀◤ℝ
乇 ℓє ¢ є∂█▬█ є∂█▬█ ▀█▀◤ ▀█▀◤ ℝ ℝ ł ł a a a a a a a a a a a
Kuzviziva gnosis 2
Mukutsvaga chokwadi. Lucid zviroto, astral inoitika, mantras, kufungisisa.
🌺🖤 Kumabvazuva Galiya 🖤🌺
Vamwe vanozovenga kpop Vamwe vanovenga anime Chinangwa ndechekuwana huwandu hwevanhu kwatiri kubvira…
Kurangana uye Zvakavanzika zveNyadenga
Whatsapp group rekurangana nezvakavanzika.
ChiBhudha kune vese
Whatsapp group reBuddhist revaBuddha kana vasiri maBuddha
Yemahara uye Yakasika Zvekunamata
WhatsApp group rekunamata, risina ma tie, pasina dzidziso ...
Whatsapp group nezvemuvhi yemakanema evatambi
Boka renyika reWhatsApp boka
Literature uye humwe hunyanzvi
Literature WhatsApp Boka
Geopolitical News (Hondo dzehondo, Hupfumi hwenyika, Zvematongerwo enyika ...)
Whatsapp boka reGeopolitics, rinosanganisira kurwisana kwemauto, hupfumi hwenyika, zvematongerwo enyika ...
CHETE ZVINOTAURA ZVAKAWANDA ... Online Investment, Bitcoins, Cryptocurrencies, Kutengesa, Forex, ...
Zvese Zvinotenderwa Muboka iri kunze kwekutaridza chakajeka uye / kana spam, spam chikonzero che…
munhuHauna account here?
Iwe watove neakaunti here?
Ukaramba uchishandisa ino saiti unogamuchira kushandiswa kwemakuki. mamwe mashoko
Iyo cookie inogadziriswa webhusaiti ino yakagadzirirwa "kutendera makuki" uye nekudaro inokupa iwe yakanyanya kunaka nzira yekubhuroka. Kana iwe ukaramba uchishandisa iyi webhusaiti pasina kushandura marongero ako cookie kana kudzvanya pane "Gamuchira" iwe uchange uchipa kubvumirwa kwako kune izvi.